Mutemo weKupa Hupfumi kuVatema Wotanga Kushanda Munyika
Kurume 01, 2010
Hurumende yatangisa kushandisa mutemo wekupa vanhu vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvehupfumi mumakambani ose ari munyika.
Kanawo makambani ane vanhu vekunze ari kushanda ari muZimbabwe ari kusungirwa kutevedza zvinodiwa nemutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act.
Makambani anokosha mari inodarika US$500 000.00 apiwa mazuva makumi mana nemashanu ekuti ange azivisa hurumende mamiriro anenge akaita hutungamiri hwawo mukuratidza kuti vachena pamwe nevekunze vane zvikamu zvehupfumi zvakadii, uye kuti vanhu vatema vanenge vaine zvikamu zvehupfumi mukambani aya zvakadii.
Zvinonziwo makambani achapiwa makore mashanu ekuti ange atevedzera zviri kudiwa nemutemo uyu.
Pane kukakavadzana kukuru muhurumende yemubatanidzwa pamusoro pemutemo mutsva uyu. Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanonzi havasi kufara nemutemo uyu, vachiti unotyisidzira vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimusi munyika.
Zvinonzi kanzuru yemakurukota, iyo inotungamirwa naVaTsvangirai, iri kuita musangano neChina wekuzeya mutemo mutsva uyu.
Vamwewo vane makambani ari munyika vanoti mutemo uyu wakanaka zvawo, asi haukwezvi vekunze vanoda kuzotanga mabhizinesi munyika.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekukoka munhu kuti auye kuzodyara hupfumi munyika, asi achizodzokera kumusha kwake asisina rumwe ruoko.
Vaimbowe mutungamiri weZimbabwe National Chambaber of Commerce, uye vari mutungamiri wekambani yeCodChem, Amai Marah Hativagone, vaudza Studio7 kuti vanofunga kuti mutemo uyu wakasikirwa, sezvo upfumi hwenyika huchiri kutotanga kumuka.
Mutungamiri weZCTU, VaLovemore Matombo, vatiwo dai zvikamu makumi mashanu nechimwe izvi zvapiwa kuvashandi, vachiti zvichaitika panyaya izvi zvichangoitika sezvakaitika munyaya dzemapurazi, zvekuti vepamusoro chete ndivo vachangowana mikana yekuwana makambani aya, veruzhinji vachiyaura.
Asi gurukota rezvekuendesa hupfumi kuvanhu vatema, VaSavior Kasukuwere, vanoti hurumende haasi kuzodzokera shure panyaya yekupa hupfumi kuvanhau vatema.
Hurukuro naAmai Marah Hativagone